Viatamin AD for tsindrona - China Ningbo Faharoa hormonina
Manual for vitaminina AD tsindrona [Description] entana ity dia colorless na jiro mavo mazava tsara no vokatra rano. [Andrakitra sy ny Ampiasao] ity dia ahitana vokatra vitaminina A sy D. ny otrikaina A dia afaka miasa toy ny hampandrosoana ny fitomboan'ny biby, foana ny asa ara-dalàna ny epithelial sela toy ny hoditra, conjunctiva, cornea sy ny sisa, dia mitaky anjara amin'ny voafintina ny maso volomparasy sy manatsara ny fanentanana ny temimaso. Ankoatra izany, fa mitaky anjara amin'ny maro gasification amin'ny vatana, indrindra fa ho an'ny ...
Manual for vitaminina AD tsindrona
Ity vokatra dia colorless na jiro mavo mazava tsara no vokatra rano.
[Andrakitra sy ny Use]
Izany dia ahitana vokatra vitaminina A sy D. ny otrikaina A dia afaka miasa toy ny hampandrosoana ny fitomboan'ny biby, foana ny asa ara-dalàna ny epithelial sela toy ny hoditra, conjunctiva, cornea sy ny sisa, dia mitaky anjara amin'ny tsary volomparasy sy voafintina, sy manatsara ny ny fanentanana ny temimaso. Ankoatra izany, fa mitaky anjara amin'ny maro gasification amin'ny vatana, indrindra fa ny gasification ny unsaturated fattyacid. Ny vitaminina D dia manana lehibe vokany eo amin'ny metabolism ny kalsioma sy phosphore sy pup ny fitomboan'ny taolana, dia tena asa toy ny fampiroboroboana ny ara-dalàna hisakana ny fiasan'ireny ny kalsioma sy phosphore ao amin'ny tsinay kely. Ny mpanao metabolic fitaovana ny vitaminina D dia afaka manitsy ny reabsorption ny kalsioma ny voa tubules, foana ny haavon'ny kalsioma ao amin'ny ra mivezivezy, sy hitondra fanampiana ao ny ara-dalàna fitomboan'ny taolana.
Izany no tena ampiasaina ny vitaminina A sy D fahampiana, toy ny alina fahajambana, keratomalacia, dermatitis, rickets, osteomalacia sy ny sisa.
Intramuscular tsindrona: iray monja levitra, 5 ~ 10ml ho an'ny soavaly sy ny biby fiompy; 2-4ml ny zana-boriky, zanak'omby, ondry sy kisoa; 0.5-1ml ny zanak'ondry sy ny kisoa keliko.
[ Voka R eaction ]
Overdose ny vitaminina A mety toxication. Matsilo ny biby habetsahan'ny poizina dia miseho toy ny fientanentanana, blurring ny fahitana, encephaledema, loany; ny mitaiza habetsahan'ny poizina dia miseho toy ny anorexie, hoditra lesion sy ny taovan'ireo fahasimbana sy ny sisa.
Be loatra vitaminina D mety hisy fiantraikany mivantana ny metabolism ny kalsioma sy phosphore, mampihena ny calcification ny taolana, hampiverina ny ectopic malefaka calcification amin'ny sela sy ny arrhythmia sy kozatra levitra sy ny soritr'aretina.
Be loatra vitaminina D ankolaka ihany koa dia afaka hanelingelina ny metabolism hafa mety levona lipid-otrikaina (toy ny vitaminina A, E sy K)
Ihany ho an'ny intramuscular tsindrona, dia tsy navela ho overdosed.
250 000 vondrona ho vitamina A, ary 00 250 vondrona for vitaminina D.
Notehirizina tao amin'ny airtight toe-javatra any amin'ny toerana afaka amin'ny mazava (ambany 30 ℃).
Previous: Tristerone Complicis tsindrona
Manaraka: Chorionic Gonadotrophin ny tsindrona (HCG)
Viatamin Ad Fa tsindrona
Tristerone Complicis tsindrona
Posterior Pituitary tsindrona